Lockdown wuxuu dhiirrigeliyay riwaayad dhab ah oo ciyaar ciyaar ah oo ka dhacday Newbury Greenham Business Park
VENUE VR waa mashiin cusub oo farshaxan dhab ah oo muuqaal ah oo ku yaal Greenham Business Park. Waxay furtay horraantii Oktoobar waxayna hadda bixineysaa fadhiyo dhadhamin ah oo loogu talagalay jilayaasha iyo xiisaha VR. Shirkaddan cusub ayaa ah dhammaystirka barnaamijka kombiyuutarka Matthew McMahon ee Newbury, oo go'aansaday inuu ...
200 × 200 Tileka Darbiga Dhoobada
Tile waa xulasho caan ah darbiyada musqusha iyo sagxadaha, waxayna keeni karaan midab, qaab, muuqaal, muuqaal dabiici ah iyo xitaa soo jiidasho. Tilmaamahayaga xulashada dusha sare ee musqusha ayaa hubin doona inaad dooratid dusha sare ee booskaaga Haddii aad u baahan tahay inaad ogaato sida loo doorto dusha sare ee musqusha ...
Dayactirka musqusha milkiilaha guriga ee Hebei Yanjin
Qoraalkan waxaa kafaala qaaday oo gacan ka gaystay wada-hawlgalayaasha sumadaha balastarka. Aragtiyada ku xusan qodobkaan waa kuwa qoraaga. Ma ka fikireysaa inaad cusbooneysiiso musqusha guriga Massachusetts? Kahor intaadan bilaabin go'aamada ku saabsan dayactirka, maxaad uga fikireysaa inaad ku darto qaar ka mid ah bii'ada ...
Tirakoobka kobaca suuqa dhoobada dhoobada adduunka ee sanadka 2020, fursadaha cusub, rajada tartanka iyo falanqaynta COVID-19 sanadka 2026
"Saamaynta Covid-19 ee warshadaha cilmi baarista dhoobada dhoobada ah, 2020 ″ ayaa lagu daray badeecadda nxtgenreports.com. Warbixinta 2020 Tiles waa dokumenti cilmi baaris ah oo ka kooban xog dhameystiran oo loo isticmaali karo in lagu dhiirrigeliyo laguna caawiyo qiimeynta dhammaan dhinacyada ganacsiga lebbiska ...
2020-2025 dabaqa adduunka iyo marmarka darbiyada suuqa saadaasha xawaaraha koritaanka, aragtida gobolka
The. waxay ku dartay daraasad faahfaahsan oo ku saabsan “suuqa dabaqa iyo derbiga deriska ah”, iyadoo si faahfaahsan u liis garaynaysa darawal kasta oo suuqa ka socda, isla markaana sameeya falanqayn adag oo ku saabsan ganacsiyada taagan. Cilmibaaristan "sagxadda iyo darbiga derbiga" cilmi baarista ayaa gacan ka geysan doonta helitaanka fursado ganacsi oo cusub iyo hagaajinta mar ...
Diirka iyo marmarka ugu quruxda badan, oo isla markaaba kor loo qaadi karo
Foornooyinka sawirada ayaa hadda boos ku leh jikada iyo musqusha. Si kastaba ha noqotee, musqusha caadiga ah ee 5 × 8-fuudh, celceliska qiimaha alaabada lebbiska iyo rakibistu waxay u dhexeysaa US $ 1,000 iyo US $ 1,500, sidaa darteed ku hagaajinta dabaqa dusha sare ee qurxinta qurxinta ayaa si dhakhso leh u baabbi'in kara miisaaniyaddaada dayactirka. Hadda, yo ...
Fabbrica Marmi e Graniti waxay daahfurtay shan marmar oo saameyn ku leh marmar-dezeen-logo dezeen-logo
Dhiirrigelinta Dezeen: Nooca Talyaani ah ee loo yaqaan 'Fabbrica Marmi e Graniti (FMG) ayaa soo saartay shan taayir oo u eg marmar, kuwaas oo loo adeegsado in lagu daboolo dusha sare iyo qalabka guryaha. Foornooyinka dhoobada ayaa qayb ka ah taxanaha 'MaxFine' ee FMG ee qaab-dhismeedka dhoobada dhoobada waaweyn leh, oo si gaar ah loogu isticmaalo ganacsiga iyo hoomka ...
43 waxyaabo raqiis ah oo caqli badan oo kaa dhigi doona inaad aad u jeclaatid gurigaaga
Markaad waqti badan ku qaadato gudaha, waxaa laga yaabaa inaad isku aragto inaad rabto inaad cusboonaysiiso booskaaga waxoogaa yar. Hubinta in gurigaaga uu dareemayo kuleyl iyo martiqaad, gaar ahaan adiga, had iyo jeer waa muhiim. (Dhamaantiis, waqti badan ayaad ku qaadataa halkan.) Waxaad bilaabi kartaa inaad kordhiso goobtaada nolosha adoo iibsanaya xoogaa raqiis ah ...
Gudaha sheekada qurxinta Aqalka Cad ee Obama
Waxaa jira macaamiil riyadeed, ka dibna qoys da 'yar, Michael S. Smith ayaa ka caawiyay inay degaan 1600 Pennsylvania Avenue sanadkii 2009. Waa naqshadeeye sare oo gudaha ah. Wuxuu adeegsaday xiriirro xiriir ah iyo nalal si uu u aqbalo wareysiyada si loo qaabeeyo Aqalka Cad ee Obama. Kismaayo Si kastaba ha noqotee, isagu ma uusan xukumin ...
Faleebada dhoobada dhoobada ah
Luukos wuxuu ka jawaabaa su'aalaha akhristayaasha ee ku saabsan qaabeynta iyo nolosha moodle toddobaad kasta. Iimayl ugu soo dir lukeedward.hall@ft.com oo la soco Instagram @lukeedwardhall Waxaan ku bilaabay tiles si aan u cusbooneysiiyo musqusha. Doorashadu waa mid xad dhaaf ah, laakiin waxaan u muuqdaa mid geesinimo leh. Qolku wuu yaryahay, markaa ma doonayo ...
Moody's: Sababtoo ah COVID-19, isbeddelada silsiladda sahayda ayaa horseeday kharashaadka isbitaalka
Nagala soo qaybgal Nofeembar 9th ilaa 11th si aad u ogaato sida telemedicine ay u bedeshay bixinta adeegyada caafimaadka iyo mustaqbalka Moody's wuxuu sheegay in nidaamka isbitaalku uusan bixin kaliya kharashyada badan ee qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed iyo agabyada kale ee caafimaadka, laakiin sidoo kale kharashyada badan ee dadweynaha. ..
Ku abuuro hadiyado gaar ah iyo xusuus qaali ah qalbiga Robbins 'Crafter's
Hooyo iyo gabadheeda, iyagoo raadinaya lamaanayaal isla nool, munaasabadaha lacag uruurinta dugsiga, xafladaha dhalashada carruurta, isu imaatinnada qoyska, iyo xitaa maydhashada caruusadda; runtii, qof kastaa wuxuu raadinayaa madadaalo, sameynta gacan-qabsi, haddiyado gaar ah iyo xusuus. Crafter's HeArt Studio oo ku yaal Binz. Waxay ka tageen macno leh ...